Phytosporin - ny fomba sy ny fampiasana, ny fampiasana izany, ny analogues
Phytosporin - ny fomba sy ny fampiasana, ireo lafiny mampiavaka ny fampiasana
Maro ny zava-mahadomelina azo ampiasaina amin'ny fitandroana ny zavamaniry. Zava-dehibe ny mahatakatra ny atao hoe "Fitosporin", ny fomba sy ny antony anaovana an'io fanafody io, ary ny maha-ilaina azy. Misy ny mampiavaka ny famolavolana vahaolana sy ny fampiasana azy ho an'ny tanjona samihafa.
Ahoana ny fampiasana "Fitosporin"?
Ity zava-mahadomelina ity dia biofungicide miaraka amin'ny fihetsika maro be izay maharitra ela. Ao anatin'ity fanafody ity dia bakteria velona, ​​izay manakana ny vokatra azo avy amin'ny asa goavana ataon'ny micro micro-organisme. Ny fitadiavana ny antony mahatonga ny Fitosporin ilaina, ilaina ny manamarika fa io fitaboana io dia mampitombo ny fananana fiarovana ny zavamaniry ary mampitombo ny fitomboana. Ny fampiasana azy dia mampihena be ny aretina azo avy amin'ny aretina.
Azo ampiasaina amin'ny fomba maro ny fomba famokarana, miaraka amin'ny fitaovana maro hafa, ohatra, miaraka amin'ny fitsaboana , ny bibikely ary ny fungicide hafa. Raha misy sedimenta mandritra ny fampifangaroana ny fiomanana, dia midika izany fa tsy mifanaraka ny mpitsikera, noho izany dia tsy soso-kevitra ny hampiasa izany fitambarana izany. Tsy azo atao ny mampifangaro ny vokatra biôlôjika amin'ny mpanafika izay miteraka resak'andro. Ilaina ny mandinika fa ny famokarana "Phytosporin" ho an'ny isam-pokontany tsirairay, noho izany dia tokony hampiasaina amin'ny tanjona tiany izy ireo, satria ao anatin'io fitambaran-javatra io dia hisy mikraoba manokana ho an'ny zavamaniry tsirairay.
"Fitosporin" - fananganana
Voalaza fa ny fototra tena izy dia ny kolontsaina bakteria antsoina hoe Bacillus subtilis . Izy ireo dia nahazo tamin'ny fomba artificial. Rehefa mitsoka ny tany sy ny zavamaniry izy, dia manomboka mihamaro ny bakteria, manimba ireo sela manimba, manampy amin'ny fambolena indray ny rafi-pandaminana. Koa satria ny firafitry ny fanomanana "Phytosporin" dia voajanahary, dia azo antoka ho an'ny zavamaniry, olona sy biby. Azonao atao ihany koa ny mitondra ny zavamaniry izay mamony sy mamokatra tsy misy tahotra, satria tsy misy vokany ratsy raha atao araka ny torolalana ny zavatra rehetra.
Amin'ny firy no mandeha ny asa "Fitosporin"?
Ity vokatra biôlôjika ity dia azo tanterahina mandritra ny hafanana midadasika be -20 ° ka hatramin'ny 25 ° C. Mandritra izany fotoana izany, ny fahasamihafana eo amin'ny fitarihana dia tsy mitovy, ary tsy azo sakanana izy ireo, raha tsy izany dia tsy miasa ny zava-mahadomelina. Raha liana amin'ny hafanana misy ny "Fitosporin" ianao, dia tokony ho fantatrao fa 1525 ° C io seranana io. Ankoatr'izany dia asaina atao ny hariva amin'ny alina. Zava-dehibe ny hoe misy andro mafana, satria mety handroaka ny "Phytosporin" ny rano. Raha avy ny orana, dia tsara kokoa ny mampihatra ilay fanafody indray.
Ahoana ny fambolena Phytosporin?
Raha mampiasa vovoka ianao, dia tsara kokoa ny manomana ny reny sy ny vahaolana miasa. Noho io trotraka io, afaka mampitombo ny fahombiazan'ny vokatra ianao.
Ao anatin'ireo torolalana momba ny fanalàmana tsara ny "Fitosporin", dia voalaza fa ny vahaolana masira mifantoka dia mikarokaroka, izay ahafahan'ny spores mifoha haingana kokoa ary betsaka kokoa.
Rehefa misy marika famantarana ny bakteria, dia azonao atao ny manary ny voa amin'ny rano ho an'ny renibe iray. Ao anatin'izany dia ho velona ireo bakteria, saingy hihena ny asany. Misaotra an'io renim-pianakaviana io dia ho voatahiry mandritra ny roa herinandro ao anaty toerana mangatsiatsiaka.
Ny fitadiavana ny fomba hitomboan'ny Fitosporin, ny fomba sy ny fampiasana izany, dia ilaina ny manamarika fa alohan'ny fampiasana, dia tsy maintsy ravina amin'ny vahaolana miasa izy io ary tsy afaka maharitra mihoatra ny adiny roa.
Azo antoka fa ilaina ny mahatakatra ny fomba hambolena ny pasteur "Phytosporin", noho izany dia tsy mila manomana fifangajangana mifangaro izy, satria manodidina ny 100% amin'ireo toeram-pivoriana dia mifoha ao amin'ny renotro. Tokony hodiovina amin'ny rano ny pastevina, amin'ny fampiharana ampahany amin'ny 2: 1 sy 2 tbsp. Mila 200 g ny fanafody. Ny kaontenera dia afaka mihidy sy mitahiry raha ilaina, saingy tsara kokoa ny manomana ny vahaolana miasa haingana, mba tsy ho very bakteria mivantana. Tokony hotazaina mandritra ny ora roa izy ary azo ampiasaina.
"Fitosporin" - fampiharana
Ny fanomanana biolojika dia ampiasaina amin'ny tanjona samihafa, noho izany dia azo raisina ho multifunctional. Ny fomba tena fampiasana "Fitosporin" dia ny fandroahana sy ny famafazana rano. Mety tsara izany:
manasitrana ny fambolena;
Miaro ny zana-ketsa amin'ny zavamiaina teratany;
mampitombo ny fanoherana ny zavamaniry;
miaro amin'ny fisian'ny aretina sy ny bibikely maro.
Ny fikorontanan'ny masera ao amin'ny "Phytosporin"
Ny medikaly dia mandà ny hampihena ny tahan'ny fambolena ny zavamaniry, fa koa mampiroborobo ny fikajiana maharitra sy ny fitomboan'ny fitomboany. Raha voan'ny "Phytosporin" ny voa, dia hivoatra haingana kokoa ny orinasa. Afangaro ny fitaovana fambolena roa vita amin'ny gaza ary apetraho ao anaty voankazo ary ento miaraka amin'ny bioremedium: afangaro ny dity 2 "Gumi", 10 sotro "Phytosporin" ary 1 tbsp. rano.
"Phytosporin" ho an'ny zana-ketsa
Ny biofungicide dia manampy amin'ny fampitomboana ny fitomboan'ny zana-ketsa, dia manana fiantraikany telo-dimanjato amin'ny karazam-pototra sy ny mety ho endriky ny karazana, ary koa mamorona ny fepetra azo ekena ho an'ny fananganana vokatra madio ara-tontolo iainana. Araka ny antontan'isa, dia mety ho 20% ny fandaniana voaomana, ary na dia avo kokoa aza. Ny famafazana zana-ketsa miaraka amin'ny "Fitosporin" dia azo ekena kokoa, fa azo ekena ihany koa ny fisotroana.
Afangaro 1 litatra ny rano ary 1 teaspoon ny vokatra, izay tsara kokoa ny misafidy amin'ny endrika mangirana. Alefaso tsara daholo ny rehetra.
Ny vahaolana dia natsipy tao anaty boaty iray misy basy ary niparitaka.
Ny torolàlana momba ny zavatra ilaina amin'ny "Fitosporin", ny fomba sy ny fampiasana ity fitaovana ity, dia voalaza fa rehefa mamboly ilay orinasa dia azo atao ny manala ny fakan'ny zana-ketsa ao amin'ny vahaolana, izay voalaza etsy ambony. Mandritra ny adiny iray ity dingana ity. Noho izany, hitombo be ny fivelaran'ny zana-ketsa.
Fikarakarana ny lakandranon'i "Fitosporin" amin'ny lohataona
Ny zavamaniry ao amin'ny trano fivoahana dia efa miorina tsara sy mivoatra, zava-dehibe ny manomana tsara ny toerana. Ny fitsaboana amin'ny lohataona "Fitosporin", izay tsy fanafody mahery vaika, no manintona ny lohataona . Misaotra noho ireo parasita ireo ary rava tanteraka ireo micro micro-organismes. Ny fanoritsoritana ny "fitosporin", ny fomba sy ny fampiharana, dia alaivo sary an-tsaina ny fomba hanamboarana trano fivoahana:
Ao anatin'ny 100 g ny rano, avelao ny tapany fahefatra amin'ny fonosana. Esory ny zava-drehetra mba tsy hisy vombony. Ny voka-bidy vokatra dia efa mihalevina ao anaty rano be dia be, mampiasa 1 tbsp. tavoahangy 10 litatra.
Manomàna ny fako sy ny tafon'ny greenhouse miaraka amin'ny fitrandrahana voaomana. Aorian'io, tsy mila manasitrana ianao.
Azo ampiasaina amin'ny fitsaboana amin'ny ala ny angona etsy ambony, amin'ny fampiharana 5 litatra isaky ny 1 km Km. m. Rehefa avy nilentika tamin'ny tany maina ny zaridaina ary rakotra sarimihetsika. Afaka andro vitsivitsy dia ahafahanao mamboly.
"Fitosporin" ho an'ny tany
Ny fanomanana atolotra dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana amin'ny tany mba hanesorana azy amin'ny parasites, ary hanatsarana ny fikajiana ny voa sy ny zavamaniry. Ny fikarakarana alohan'ny fitsaboana dia atolotra amin'ny fampiharana isan-taona Ny famongorana ny tany "Phytosporin" dia tokony hatao amin'ny lohataona alohan'ny famindrana. Azonao atao ny mampiasa ny rongony amin'ny endriky ny vovoka, mampiakatra 5 g ny vovony amin'ny siny rano. Ny vahaolana dia mety amin'ny fandroana ary ampy ny vola omena ho an'ny 1 sq. M. M.
"Fitosporin" ho an'ny hazo fihinam-boa
Maro ireo bibikely no fantatra, ary marary mafy marobe izay misy fiantraikany amin'ny hazo, miharatsy ny vokatra sy ny kalitaon'ny voankazo. Raha tsy vita ny fitsaboana, dia mety maty ny kolontsaina. Ny fitsaboana ny hazo fihinam-boa "Phytosporin" - ny fitondrana sy ny fikarakarana ny hazo sy ny kirihitra dia atao in-droa: mandritra ny fanokafana ny ravina sy ny endriky ny ovaire. Mba hanomanana ny vahaolana amin'ny rano 10 litatra dia ampio 5 g ny vovony.
"Phytosporin" - analogues
Maro ny zaridaina mampiasa ny "Trihodermin" - birao famokarana izay afaka miatrika aretina maherin'ny 60, voan'ny fungi. Azo vidiana amin'ny vovo-dronono sy ny vovo. Ny famaritana izay mety hanoloana ny "Fitosporin" dia tokony ekena fa ny "Trichodermin" koa dia mandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny fambolena ary manomana ny voa mba hambolena.
Zavamaniry Exclusive - Growing
Afirina amin'ny dill - ahoana no fialana?
Geranium, mikarakara ao an-trano - mora ve ny mahavelona ny voninkazo maitso?
Aiza no misy ny orkide?
Superphosphate - fampiharana
Nahoana no manidina ravina ny lemaka?
Eshinanthus - fikarakarana tokantrano
Ahoana no hanaovana hydrogel ao an-trano?
Ahoana no fomba hiatrehana ny hatsiaka?
I Jessica Biel dia hita taratra miaraka amin'ny zokiny lahy Silas
Midika ho fanadiovana volafotsy
Ny fibra uterine - ny soritr'aretina sy ny fitsaboana ny aretina amin'ny dingana isan-karazany
Inona no atao hoe multiplication amin'ny multivark?
Drinks for loss of weight
Ny fitsapana ny ra ho an'ny hCG vohoka
45 mahagaga momba ny YouTube
Menu an'ny renim-pianakaviana - ny volana voalohany
Monastera any Stavrovouni
Akupuncture ho an'ny osteochondrosis
Jama avy amorom-boninkazo - fomba fitehirizana voankazo matsiro mahavelona
Fashion, trends, styles - lohataona-lohataona 2016